DRETFP DIANA : Fihaonan’ny Ministra tamin’ireo fikambanan’ny mpanao asa-tanana, ny tanora ary ny vehivavy ary ny Chambre de Commerce – METFP
Tao amin’ny efitrano lehiben’ny Kaomina Nosy Be no nihaonan-dRamatoa Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, VAVITSARA Rahantanirina Gabriella, tamin’ireo fikambanan’ny mpanao asa-tanana, ny tanora ary ny vehivavy ary ny Chambre de Commerce. Ny zoma 17 septambra 2021 no nanatanterahana izany niaraka tamin’ireo manam-pahefana tao an-toerana.
Nifantoka indrindra tamin’ny fampananan’asa ny tafa sy dinika ary nisongadina tao ihany ny fenitra arahina raha hanokatra ivontoeram-panofanana. Namerina nampahafantatra ireo fenitra sy toro-lalana ny Talem-paritry ny ETFP Diana, ary nanome toky fa maimaimpoana ny fangatahana fanokafana sy fahazoan-dalana hampiofana.
Nasian-dRamatoa Ministra tsindrim-peo manokana ny fanofanana arak’asan’ireo tanora izay tokony hifanaraka amin’ny filan’ny faritra mba hanamora ny fampananan’asa . Amin’ny maha tanànan’ny fizahantany an’i Nosy Be dia ny asa manodidina izany sy ny asa tanana no tena mahasarika ny tanora.
Hetahetan’ireo mpandray anjara, ny fanofanana fohy ezaka, hoenti-manatsara ny asa mahavelon-tena, indrindra ny fameranana indray ireo tanora nivoaka ny fonja eo anivon’ny fiaraha-monina, amin’ny alalan’ny fisitrahana fiofanana sy asa mendrika. Resy lahatra ny rehetra fa antoky ny fampandrosoana ny fanofanana arak’asa.